Nnwere onwe nke Blog | Martech Zone
Mgbe anyị chere echiche banyere akwụkwọ akụkọ ọgbara ọhụrụ, anyị na-eche maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị egwu nke guzobere ụkpụrụ omume, ụkpụrụ na omume. N'ime ha anyị na-ahụ ndị na-enyocha eziokwu, ndị nta akụkọ gụrụ akwụkwọ na Mahadum, ndị editọ oge na ndị nkwusa dị ike. N'ihe ka ukwuu, anyị ka na-elegara ndị nta akụkọ anya dị ka ndị na-edebe eziokwu. Anyị tụkwasịrị obi na ha arụzuola ịdị uchu ha mgbe ha na-enyocha ma na-akọ akụkọ.
Ugbu a blọọgụ abanyela na andntanetị ma onye ọ bụla nweere onwe ya ikwupụta echiche ha, ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị America na-ajụ ma ọ bụ nnwere onwe nke ndi nta akuko kwesiri itinye na blọọgụ. Ha na-ahụ ihe dị iche na pịa na na blog. Ọ dị oke njọ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị anaghị amụ akụkọ ihe mere eme. Emegharị Ndezigharị Mbụ na Disemba 15, 1791, dịka otu n’ime mmegharị iri nke mejupụtara Iwu Ikike.
Ndị nnọchiteanya agaghị enwe iwu ọ bụla gbasara ntọala okpukpe, ma ọ bụ machibido mmemme ya n'efu; ma ọ bụ iwepu nnwere onwe ikwu okwu, ma ọ bụ nke akụkọ; ma ọ bụ ikike ndị mmadụ na-agbakọ n'udo, na ịrịọ gọọmentị maka mmezi nke mkpesa.
Akwụkwọ akụkọ mbụ na New World bụ Publick Occurences, ederede 3 nke mechiri ngwa ngwa ebe ọ bụ na ikike ọ bụla akwadoghị ya. Lee ihe akwụkwọ akụkọ ahụ dị ka ya.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke agha ahụ na 1783, e nwere akwụkwọ akụkọ iri anọ na atọ na-ebipụta. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ akwụkwọ akụkọ na-agbasa okwu nduhie, anaghị eme ihe n'eziokwu, ma edekwara ha iji bulie iwe nke ndị ọchịchị. Mgbanwe ahụ na-abịa na blog ahụ ndị nta akụkọ na-aghọ ngwa ngwa n'ịgbasa okwu ahụ. Otu narị afọ ka e mesịrị, e nwere akwụkwọ dị iche iche 43 e dekọrọ na ọnụ ọgụgụ 11,314. Ka ọ na-erule 1880 nke akwụkwọ akụkọ izizi kụrụ otu nde. E bipụtara ọtụtụ n'ime ha n'ọba ma ree ha penny n'otu ụbọchị.
N'okwu ndị ọzọ, ọ mbụ akwụkwọ akụkọ yiri nnọọ blọọgụ anyị na-agụ taa. Zụta akwụkwọ akụkọ na ide akwụkwọ akụkọ gị achọghị agụmakwụkwọ ọ bụla na enweghị ikike. Ka usoro mgbasa ozi na ndị nta akụkọ si malite, enweghị ihe akaebe na edere ederede ka mma ma ọ bụ na ọ bụ eziokwu.
Akwụkwọ akụkọ edo edo jidere na United States ma na-aga n'ihu taa. Ndi oru ntaneti mgbasa ozi na-ele ndi mmadu anya dika ndi ochichi ma jiri ndi ozo ha mee ihe iji gbasaa echiche ahu. Ma agbanyeghị mmeso ọjọọ, ha niile na-echebe n'okpuru Ndezigharị Mbụ.
Nke a apụtaghị na anaghị m asọpụrụ nta akụkọ. Achọrọ m ka ọrụ nta akụkọ dịrị ndụ. Ekwenyere m na ịkụziri ndị nta akụkọ ka ha nyochaa, na-echekwa gọọmentị anyị, ụlọ ọrụ anyị na ọha mmadụ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Ndị na-ede blọgụ anaghị eme olulu miri emi (ọ bụ ezie na nke ahụ na-agbanwe). Anyị na-achọkarị ịkọ akụkọ mgbe ndị odeakụkọ ọkachamara na-enyekwu oge na akụrụngwa igwu ala.
Anaghị m amata ọdịiche nke mgbasa ozi na nke ndị na-ede blọgụ. Onweghi onye puru igosi uzo ebe oru nta akuko kwubiri na ntaneti bido. Enwere ụfọdụ blọọgụ dị ịtụnanya nwere ihe ndị arụmụka edere nke ọma ma nyochaa nke ọma karịa ụfọdụ isiokwu anyị na-ahụ site na ntanetị akụkọ oge a. Onweghikwa onyeiche di iche. A na-agụ akwụkwọ akụkọ ugbu a n'ịntanetị karịa ka ọ dị na ink na akwụkwọ.
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a kwesịrị ịmara na blogger nke oge a dị nnọọ ka ndị nta akụkọ nke natara nchebe na 1791 mgbe Ndezigharị Mbụ gafere. Nnwere onwe ahụ abụghị ọrụ onye na-ede okwu ahụ dịka ọ bụ okwu n'onwe ha. Bụ pịa ndị mmadụ ka ọ bụ ndị na-ajụ mmụọ ase? M nyefere na ọ bụ ma ọ bụ abụọ. Ebumnuche nke nchedo bụ iji hụ na mmadụ ọ bụla nwere ike ịkekọrịta echiche ha, echiche na ọbụnadị echiche ha na ọha nweere onwe ha… ọ naghị egbochi nchebe naanị eziokwu ahụ.
Enwere m maka nnwere onwe nke mgbasa ozi, na imegide mmebi iwu ọ bụla iji mechie ọnụ site n'ike ma ọ bụghị site na mkpesa ma ọ bụ nkatọ, ikpe ziri ezi ma ọ bụ ikpe na-ezighị ezi, nke ụmụ amaala anyị megide omume nke ndị ọrụ ha. Thomas Jefferson
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a na-ajụ nnwere onwe nke blọọgụ maka ezigbo ihe ndị nna nna anyị chọrọ iji chedo ndị nta akụkọ na Ndezigharị Mbụ.